Semalt B2B SEO र SEO मार्केटिंगमा: कम्पनीहरूले के विचार गर्नुपर्छ?
कुनै वेबसाइटको स्वामित्व राख्ने कुनै पनि कम्पनीको लक्ष्य दृश्यता हो। हामी सबैलाई थाहा छ, दृश्यता तपाईंको साइटको एक राम्रो SEO संग सुरू हुन्छ। तर SEO कसरी विशेष गरी B2B क्षेत्रमा काम गर्दछ? र कसरी तपाइँ गुगल मा तपाइँको वेबसाइट लक्षित प्राप्त गर्न अगाडि बढ्नु पर्छ? र त्यो Semalt को मुख्य उद्देश्य हो कम्पनीहरु लाई एक राम्रो दृश्यता को लागी समर्थन गर्न राम्रो परिणाम प्राप्त; हामीले यी विभिन्न प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर दिन यो आवश्यक ठाने। त्यसो भए, यस लेखमा, हामी B2B SEO को लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण आधारभूत, प्राविधिक सर्तहरू, प्रक्रियाहरू र रणनीतिहरूको स्पष्ट पार्नेछौं।
कसरी B2B कम्पनीहरु खोज इन्जीन राक्षसको SERP मा उपयुक्त प्लेसमेन्ट समात्न को लागी व्यवस्थापन गर्छन्?
सबै भन्दा पहिले, यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि कसरी तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले गुगलमा खोजी गर्दछ (वा अन्य खोज इञ्जिनहरू)।
किनभने खोजीकर्ताहरूले प्राय: उनीहरूको आफ्नै समस्या जान्दछन् - तर साधारणतया तिनीहरूलाई अझै यसको समाधान र निश्चित रूपमा ती समाधानहरूको प्रदायकहरू थाहा छैन। यसको मतलब, सामग्रीको साथ साँच्चिकै राम्रो एसईओ गर्नका लागि, तपाइँले तपाइँको लक्षित समूहको समस्याहरू जान्नुपर्दछ
तपाईंले यी समस्याहरूको लागि तपाईंको सामग्री अप्टिमाइज गर्नुपर्नेछ। र तपाईंको सामग्रीमा, तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूबाट सबै सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिनुपर्दछ।
तर सबै भन्दा: गुगललाई तपाईको कुञ्जी शब्द खोज्नुहोस् र खोज परिणामहरूलाई हेर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाईं प्रयोगकर्ताहरूको खोजी इरादा पनि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको सामग्री कसरी संरचना बनाउने भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। थपको रूपमा, तपाई राम्रो र ranking्कि articles लेखहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ जुन सम्बन्धित कुञ्जीशब्दहरू, वाक्यांशहरू र शीर्षकहरू जुन तपाईंले आफ्नो सामग्रीमा कभर गर्नुपर्दछ। विगतमा, गुगलको कुञ्जी शब्द योजनाकार प्राय: एक नि: शुल्क विकल्पको रूपमा सिफारिस गरिएको थियो। आज हामी यसलाई सफा अन्तस्करणले गर्न सक्दैनौं। गुगल विज्ञापनले दिने नतिजा एकदम अस्पष्ट छन्। यदि तपाईं स्थायी र सफलतापूर्वक एसईओ गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं एसईओ उपकरणमा लगानी गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्न। तर राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न उपकरणहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसो भए, उत्तम हो SEO लाई सुम्पनु व्यावसायिक एजेन्सी चाँडै मनपर्दो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न तपाईंको ख्याल राख्नेछ।
SEO उपकरणहरू, के तिनीहरू यसको लायक छन्?
उदाहरण को लागी, हामी दुई SEO उपकरणहरु प्रयोग गर्दछौं: Sistrix र Semrush। यहाँ मेरो व्यक्तिगत अनुभवको लागि सिस्ट्रिक्ससँग सामान्य दृश्यता र व्यक्तिगत श्रेणीकरणमा उतार-चढावको बारेमा धेरै राम्रो सिंहावलोकन छ:
सिस्ट्रिक्सले यूआरएलहरूको ईतिहासको ईतिहास स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ साथ साथै गुगल खोज परिणाममा राखिएको कीवर्डहरूको ईतिहास पनि। यस तरीकाले तपाईं लगातार जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी र्याs्किंग गरिरहेको छ र एसईओ रणनीतिले लामो अवधिमा भुक्तान गरिरहेको छ।
Semrush को साथ, तथापि तपाईले कुञ्जीशब्द जादुई उपकरण प्रयोग गरी अत्यन्त राम्रो र विस्तृत कुञ्जीशोध अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ:
सेमरुशको कुञ्जीशब्द जादुई उपकरण कुञ्जीशब्द अनुसन्धानको लागि आदर्श हो। उदाहरण को लागी, यसले कुञ्जी शब्द, उस्तै र सम्बन्धित खोज क्वेरीका साथै खोजी भोल्यूम, प्रतिस्पर्धा र कुञ्जी शब्द कठिनाईका साथै प्रतिस्पर्धा घनत्वका लागि उपयुक्त डब्लू-प्रश्नहरू देखाउँदछ।
सार्थक कुञ्जी शब्दहरूको साथ तपाईं कसरी आफ्नो सामग्री गुगलमा राख्नुहुन्छ?
खोज क्वेरीहरू र कुञ्जीशब्दहरूमा प्राय: प्रति महिना एकदम कम खण्डहरू हुन्छन्, विशेष गरी B2B र सामान्य विषयहरूका लागि। 100-500 प्रति महिना खोज क्वेरीहरू B2B शीर्षकहरूको लागि पहिले नै धेरै हो। कम्पनीहरु अक्सर विषयहरु जुन googled छन् र औसत मासिक .०- per० पटक हुन्छ।
त्यसोभए पनि यदि तपाईले SERP को पहिलो स्थान मा आफ्नो सामग्री राख्न सक्नुहुन्छ र rate०% को क्लिक दर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ - त्यो एकदम थोरै ट्राफिक हुनेछ जुन तपाई गुगल मार्फत आफ्नो वेबसाइटमा पाउनुहुनेछ।
तर तपाईं यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ: B2B मा टर्मिनोलजी सधैं एकरूप हुँदैन, समानार्थी शब्दहरू प्रायः प्रयोग गरिन्छ र शब्द संयोजनहरू परिवर्तन हुन्छन् वा पुन: संगठित हुन्छन्। चाल भनेको तपाईको सामग्रीलाई खोजी प्रश्नसँग सम्बन्धित सबै शीर्षकको लागि वर्गीकृत गर्न दिनु हो। र तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले समग्र सामग्री सिर्जना गर्नुभयो भने फोकस किवर्डहरू, उनीहरूको समानार्थी शब्द र सम्बन्धित वा विषयसँग सम्बन्धित अन्य सर्तहरू समावेश गर्दछ।
विशेष गरी तपाईको खोज इञ्जिन अनुकूलनको सुरूमा, कम खोज भोल्युमको साथ कुञ्जी शब्दहरूलाई बेवास्ता गर्न गल्ती नगर्नुहोस् र तुरुन्तै खोजी क्वेरीहरूको लागि अनुकूल गर्नुहोस् जुन एक महिनामा 5000००० प्रश्नहरू छन्। यहाँ नियमको रूपमा तपाई आफैलाई शीर्ष गुगल स्थानमा राख्न सक्षम हुनुहुने छैन।
त्यसोभए कुञ्जी शब्दहरूको सम्पूर्ण सेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्: यो गर्नको लागि तपाईले सर्वप्रथम विस्तृत शीर्षक र खोजशब्द अनुसन्धान गर्नु पर्छ। यो विशेष गरी ahrefs उपकरण संग राम्रो काम गर्दछ।
कुञ्जीशब्द एक्स्प्लोररको साथ तपाईले खोज्न सक्नुहुनेछ कि कति पटक सम्बन्धित कुञ्जी शब्द गूगल हुन्छ, कुन पृष्ठहरू हाल यसका लागि स्तर निर्धारण गर्दैछ र यो किवर्डको लागि SERP मा आफैंलाई राख्न कत्ति गाह्रो हुन्छ।
थप रूपमा, सम्बन्धित खोजी प्रश्नहरूको साथ साथै प्रश्नहरू र कीवर्डहरू जसका लागि लेखहरू SERP मा पनि क्रमबद्ध हुन्छन्।
यसले तपाइँलाई तपाइँको सामग्रीमा कुन विषयहरू कभर गर्नु आवश्यक छ भन्ने बारेमा पहिलो संकेतहरू दिन्छ, कुन प्रश्नहरूको उत्तर तपाइँको सामग्रीमा हुनुपर्दछ र कुन कुञ्जी शव्दहरूलाई तपाइँको सामग्रीमा छुट्टै अनुच्छेद समर्पण गर्न आवश्यक छ।
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ जब तपाइँ बहुविध कुञ्जी शव्दहरूको लागि पोष्ट र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाइँले विषयवस्तुलाई कभर गर्न दुई वा अधिक पोष्टहरू आवश्यक पर्दछ?
त्यो मुख्यत: सम्बन्धित कुञ्जी शब्द पछाडि खोजी गर्ने अभिप्रायमा निर्भर गर्दछ। खोज सर्तहरू B2B लीड जेनेरेसन र B2B लीड जेनरेशनको खोज खोजी समान छ र यदि तपाईं दुबै कुञ्जी शब्दहरू गूगल गर्नुहुन्छ भने तपाईंले पाउनुहुनेछ कि SERPs लगभग समान छ।
केवल यहाँ परिक्षण लिनुहोस्: यदि तपाईंलाई दुई वा तीन कीवर्डका लागि एउटा पोष्ट श्रेणी दिन पर्याप्त छ कि छैन भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने सम्बन्धित खोजी परिणाम पृष्ठहरू तुलना गर्नुहोस्। यदि 60०% (उदाहरणका लागि 10 बाहिर)) भन्दा बढी परिणामहरू मेल खान्छन् वा यदि स्थितिमा केवल थोरै भिन्नताहरू छन् भने - त्यसो भए सामग्रीको एक टुक्रा - जसको मतलब यूआरएल भनेको तपाईंको लागि पर्याप्त छ यदि तपाईं पूर्ण खोजी ईच्छाले पूरा गर्नुहुन्छ भने। जहाँसम्म, यदि SERPs का नतीजाहरू धेरै फरक हुन्छन्, तपाईंलाई सामान्यतया सामग्रीको विभिन्न टुक्राहरूको आवश्यकता पर्दछ।
प्रयोगकर्ताको अनुभव र संकेतहरू: SEO का लागि महत्वपूर्ण मेट्रिक
"प्रयोगकर्ता अनुभव" अक्सर B2B क्षेत्रमा एक विदेशी शब्द हो। सर्तले वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्तोषजनक सर्फिंग अनुभव छ कि छैन भनेर वर्णन गर्दछ उदाहरणका लागि उनीहरूले खोजिरहेका जानकारीहरू छिटो फेला पार्दछन्। गुगलले प्रयोगकर्ताको अनुभव बनाएको हो, न कि प्रयोगकर्ता आफैंबाट नाप्ने संकेतहरू नै गुगलका लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण र ranking्कि factors कारकहरूमध्ये एक हो।
गुगलले कहिले भनेको छैन जुन कुन कारकहरू हुन् र कहाँबाट संकेतहरू आएका थिए - जसले B2B खोजी ईन्जिनहरूलाई अनुकूलन बनाउँदछ खोजी खोजीलाई पूरा गर्नका लागि अलि बढी कठिन। मुख्य आंकडा जस्तै बाउन्स रेट, साइटमा समय र भ्रमण गरिएको उपपृष्ठहरूको संख्याले भूमिका खेल्नु पर्दछ। गुगलले सम्भवतः विभिन्न च्यानलहरू मार्फत स the्ग्रहहरू स :्कलन गर्दछ: यसले खोज परिणाम पृष्ठमा व्यवहार समावेश गर्दछ, तर व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको क्रोम ब्राउजरबाट र गुगल एनालिटिक्सबाट डाटा पनि।
एउटा उदाहरण तथाकथित "छोटो क्लिक" हो। यदि तपाईं गुगलमा नतिजा कल गर्नुहुन्छ र ब्राउजरको "पछाडि बटन" मा क्लिक गर्नुहोस् (पृष्ठमा क्लिक गरे जस्तो अन्तर्क्रिया नगरीकन), यो एक नकारात्मक प्रयोगकर्ता संकेत हो। गुगलले अब नोट गर्‍यो कि परिणाम खोजी अभिप्रायसँग मेल खाँदैन र यसलाई "अन्य खोजीहरू पनि ..." को साथ बनाउन कोसिस गर्दछ।
पृष्ठमा कसरी प्रयोगकर्ता कायम गर्ने?
खोज परिणाम धेरै छोटो क्लिक पछि दंडित छ र यसको राम्रो रैंकिंग गुमाउँछ। यद्यपि गुगलले यसको लागि सहि डाटा राख्छ। सामग्री बजारका लागि यसको अर्थ निम्न हो: क्लिकको लागि स्निपेट अप्टिमाइज गर्न पर्याप्त छैन; प्रयोगकर्ता पनि पृष्ठ मा राख्नु पर्छ।
जब तपाईं पृष्ठ डिजाइन गर्नुहुन्छ र यसलाई सामग्रीको साथ बनाउनुहुन्छ, तपाईंसँग सँधै एक कार्य वा दिमागमा हुनुपर्दछ जुन आगन्तुकले लिनुपर्दछ वा पछ्याउनुपर्दछ उनीहरूले चाहेको जानकारी फेला पार्न। उदाहरण को लागी, पहिलो दृश्य क्षेत्रमा क्लिक प्रोत्साहन दिनुहोस् असाधारण विज्ञापन पाठ राख्नुको सट्टा सफा हेडिingsहरु संग काम गर्नुहोस् र धेरै अव्यवस्थित पृष्ठहरु को सट्टा राम्रोसँग जोडिएको उप पृष्ठहरु।
साथै, विचार गर्नुहोस्: यदि कसैले क्लिक गर्न पर्याप्त विश्वास गर्दैन भने, कुन जानकारीले उसलाई तपाईंको वेबसाइटमा गहिरो तान्न सक्छ? स्क्रोलिंगलाई प्रोत्साहित गर्न पृष्ठको अर्को खण्डमा यो जानकारी राख्नुहोस्।
व्यक्तिगत वर्गहरूको दृश्य परिसीमन पनि महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी प्राविधिक लक्षित समूहहरू तिनीहरूको आँखासँग एन्कर पोइन्टबाट एन्कर पोइन्टमा जान्छन् - यो तपाईंको लागि सजिलो बनाउँदछ। उही लामो पाठहरूमा लागू हुन्छ, उदाहरणका लागि कर्पोरेट ब्लगमा। यी कार्यको लागि थिमेटिक उचित कलहरूसँग राम्रोसँग संरचित हुनुपर्दछ र साथ हुनुपर्दछ।
सामग्री र प्राविधिक खोज इञ्जिन अनुकूलनका लागि महत्त्वपूर्ण: सामग्रीमा लिंकहरू
एउटा विन्दू जुन तपाईंको रँकिंगलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ तपाईंको सामग्रीमा लिंकहरू। यो ब्याकलिks्कको बारेमा होइन जुन तपाइँ अन्य साइटहरूबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर लि yourself्कहरूको बारेमा जुन तपाइँ आफैले सेट गर्नुभयो। दुबै आन्तरिक लिंकहरू र अन्य वेबसाइटहरूमा लिंकहरू।
लिंकहरू अझै पनी क्रमबद्ध कारक हुन् जुन गुगल द्वारा जाँच गरीएको छ र बोटबाट सजीलै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्छ कि संरचित आन्तरिक लिंकको मतलब खोजी ईन्जिनले बुझ्दछ कि तपाईं कुनै निश्चित विषयको साथ समग्र व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। थप रूपमा, प्रत्येक आन्तरिक लिंकले सम्बन्धित लि post्क गरिएको पोष्टलाई धक्का दिन्छ र सहि खोजी वाक्यांशको लागि राम्रो गुगल र्या ranking्कि withको साथ मद्दत गर्न सक्दछ।
बाह्य लिंकहरू, यसको मतलब अरू डोमेनहरूमा लिंक जुन तपाईंले आफूलाई सेट गर्नुभयो। जे होस्, तपाईंले प्रमाणित गर्नु पर्छ कि तपाईंको सामग्री प्राविधिक रूपमा सहि छ। यदि तपाईंले लि set्कहरू सेट गर्नुभयो जुन तपाईंको सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ, उदाहरणका लागि अध्ययन र यस शीर्षकमा अन्य योगदानहरूको लागि, तपाईं स्रोतहरूको साथ आफ्नो कथनहरूको ब्याक अप राख्नुहुन्छ र यसरी तपाईंको सामग्रीलाई विश्वासयोग्य बनाउँदछ।
निश्चित गर्नुहोस्, कि तपाईं सँधै विषय र सामग्रीको सर्तमा उच्च गुणको पृष्ठहरूमा लिंक गर्नुहुन्छ र सामग्रीलाई शंकास्पद बनाउँनुहुन्न, किनकि त्यहाँ तपाई आफैं व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ। B2B मा बाह्य लिंकहरू शैक्षिक कागजात वा ह्वाइटपेपरमा स्रोत सन्दर्भसँग समान व्यवहार गर्दछ। शुद्धता जाँच गरिनु पर्छ।
राम्रो श्रेणीकरणको लागि अर्को प्राथमिक कारक B2B लिंक भवन हो।
प्राविधिक B2B खोज ईन्जिन अनुकूलन को लागी सल्लाह
टेक्निकल एसईओ मा सबै शीर्षकहरू समावेश हुन्छन् जुन तपाईंको वेबसाइटमा हुन्छन् तर त्यसको सामग्रीसँग केहि गर्नका लागि छैन। पृष्ठभूमि: गुगलको लक्ष्य मध्ये एउटा केवल खोजयोग्यता सुधार गर्नु हो, तर इन्टरनेटको अनुभव पनि हो। यसैले गुगलले वेबमास्टर्सलाई उपयोगी र फेला पार्न सजिलो जानकारी प्रदान गर्न बाध्य पार्दैन। यदि तपाइँ श्रेणीकरणको शीर्षमा हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको वेबसाइट "हुडको मुनि" एकदम राम्रो तेल भएको मेशीन पनि छ भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ।
यो अनलाइन उपस्थितिको संरचना, स्रोत कोडको गुणस्तर, सामग्री तत्वहरूको सही टेक्निकल लेबलिंग, लोड गर्ने समय, सर्भर सेटअप र अधिकको चिन्ता गर्दछ। सबै साधारण मार्केटरलाई धेरै प्राविधिक ध्वनिहरू। तर चिन्ता नलिनुहोस्: हामी यस बिन्दुमा प्राविधिक कार्यान्वयनमा गहिराउँदैनौं, विशेष गरी वेबसाइटहरू आन्तरिक वा बाह्य सेवा प्रदायकहरूले विकसित गरेको हुनाले। बरु, हामी कुञ्जीशब्दहरू दिन्छौं कि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बिल्कुल अवलोकन गर्नुपर्दछ B2B खोज इञ्जिन अनुकूलनको सबै पक्षहरूमा न्याय गर्न।
अब मोबाइल मात्र आउँछ
मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुकूलन
वेबसाइटहरूलाई २०१ 2015 पछि श्रेणीकरणमा सजाय दिइयो यदि यी साइटहरू ट्याब्लेट र स्मार्टफोनमा प्रदर्शनको लागि अनुकूलित छैनन्। एक वेबसाइट को विकास यसैले सधैं मोबाइल प्रस्तुतीकरण पनि विचार गर्नुपर्छ।
किनभने केही महिना अघि मात्र गुगलले डेस्कटप अनुक्रमणिका रद्द गर्‍यो, जसको मतलब हो कि मोबाइल इन्डेक्स अनुसार र the्किs मात्र तोकिएको छ। मोबाइल पहिले मोबाइल मात्र भयो।
तपाई गुगल एनालिटिक्समा हेर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको वेबसाइटका आगन्तुकहरू तपाईंको साइटमा मोबाइल वा डेस्कटप मार्फत आउँछन्। डिभिजनमा निर्भर गर्दै, तपाईंले आफ्नो ध्यान प्राथमिकता दिनु पर्छ। तर यो दिमागमा राख्नुहोस् कि मोबाईल अवलोकन गुगलका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र भ्वाइस खोजी र एआईलाई धन्यवाद, वेबसाइटहरू भविष्यमा मोबाइल उपकरणहरूबाट प्रायः पहुँच गरिन्छ।
सुझाव: एक सभ्य सीएमएस (सामग्री प्रबंधन प्रणाली) तपाइँ विषयहरू प्रदान गर्दछ जुन मोबाइल प्रयोगको लागि पहिले नै अनुकूलित छ। यदि त्यसले १०० प्रतिशत काम गर्दैन भने, विभिन्न प्लगइनहरूले मद्दत गर्न सक्छन्।
यी उपायहरू र विशिष्टताहरू विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्, मोबाइललाई मात्र धन्यवाद:
द्रुत पृष्ठ लोड गर्ने समय: पृष्ठ seconds सेकेन्ड भन्दा कममा लोड गर्नुपर्दछ, विशेष गरी अनलाइन
ग्राफिक अप्टिमाइजेसन: छविहरू, ग्राफिक्स, भिडियो, आदि। पनि द गो मा पहुँच योग्य हुनु पर्छ
नेभिगेसन, ब्यानर र गडबडी: मोबाइल दृश्यमा यसलाई न्यूनतम गर्नुहोस्। मोबाइल सामग्री ब्यानर र यस्तै जस्तो प्राय: लामो समयसम्म स्पष्ट हुँदैन
तपाइँको विकासकर्ताले तपाइँलाई सफा कोडका लागि के उपायहरू विचार गरिरहेको छ बताउन दिनुहोस्। तपाईले यसको एक चौथाई मात्र बुझ्नुहुनेछ, तर निश्चित गर्नुहोस् कि उसले वास्तवमै यस ठाउँमा काम गर्छ।
कोड र B2B खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको सर्तमा पनि महत्त्वपूर्ण: सही उद्देश्यका लागि सहि एचटीएमएल पदनाम प्रयोग गरेर। <H1> को रूपमा परिभाषित हेडि sub एक पटक मात्र सबपृष्ठमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। CSS stylings कक्षाको रूपमा विश्वव्यापी बनाउनुपर्नेछ र प्रत्येक व्यक्तिगत HTML तत्वको लागि हात द्वारा प्राय: परिवर्तन गर्नु हुँदैन। त्यहाँ विशेष ढाँचाहरू पनि छन्, उदाहरणका लागि, टेलिफोन नम्बर सजिलैसँग पहिचान गर्न मिल्ने खालका खोजी ईन्जिनहरूको लागि।
मेटा तत्व (मेटा ट्याग)
खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको क्लासिक्स, सामूहिक रूपमा स्निपेटको रूपमा चिनिन्छ: मेटा शीर्षक (खोजी परिणाम पृष्ठमा हिटको लि linked्क गरिएको हेडि)), मेटा वर्णन (शीर्षक अन्तर्गत सानो टिजर पाठ) र मेटा किवर्ड्स, कुञ्जीशब्दहरूको सूची। त्यो म्यानुअली सिर्जना गर्न सकिन्छ र जसले वेबसाइटको सामग्री समावेश गर्दछ - यद्यपि पछिल्लोले तपाईंको स्तरमा कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यसोभए यसले कुनै फरक पार्दैन कि तपाइँ मेटा पृष्ठ कुञ्जीहरू तपाइँको पृष्ठको लागि सेट गर्नुभयो वा गर्नुहुन्न।
मेटा एलिमेन्ट्स रैंकि forका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। आज यी तत्वहरूले मुख्यतया खोजी परिणाम पृष्ठहरूमा क्लिक दरलाई बढवा दिन्छ। मेटा शीर्षकमा कार्यको लागि कलहरू यसको लागि सहयोगी छन्, मेटाको वर्णनका फाइदाहरूको बारेमा स्पष्ट तर्कहरू पनि।
त्यसोभए तपाईको स्निपेटको पोइन्टमा तपाई सिधा हुनु पर्दछ। किनभने गुगलले तपाईंको सामग्री परीक्षण गरे पनि, पहिलो खोज परिणाम पृष्ठ (SERP) मा अप्टिमाइजेसन को लागि धन्यवाद, खोजी ईन्जिनले तपाईंलाई तलका पछाडि दर्ता गर्दछ यदि तपाईंले कुनै क्लिक वा केवल छोटो क्लिकहरू उत्पन्न गर्नुभएन भने।
मेटा तत्वहरूमा सुझावहरू
मेटा शीर्षक: कुञ्जी शब्द आदर्श रूपमा सुरुमा हुनुपर्दछ, यो कुनै पनि केसमा हुनुपर्दछ। अब तपाइँ पृष्ठ सामग्रीको मुटुमा पुग्नु पर्छ र तपाइँको सामग्री किन आवश्यक छ भनेर स्पष्ट पार्दछ।
मेटा विवरण: मैले भनें, यसले सिधा रैंकिंगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तर यसले तपाईंको पोष्ट क्लिक गरिएको छ कि छैन त्यसले असर गर्दछ। कसरी खोजकर्ताले तपाइँको पोष्ट क्लिक गरेर फाइदा लिन सक्छ भनेर वर्णन गर्नुहोस्। "अब", "नि: शुल्क", "लाभ", "तुरुन्त" र "सफलता" जस्ता शब्दहरु लाई सक्रिय पार्नाले सबै फरक गर्न सक्दछ।
धेरै संस्करणहरू परिक्षण गर्नुहोस् र तपाईंको स्निपेटहरू नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस्, किनकि गुगल पनि यसको सेटिंग्स र रैंकिंग कारकहरू लगातार परिवर्तन गर्दैछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई गुगलको लम्बाई निर्धारणको पालना गर्नुहुन्छ खोजी परिणाम पृष्ठमा स्वच्छ तस्विर उत्पादन गर्नका लागि। यहाँ तपाइँ औद्योगिक मार्केटिंगमा एक अनुकूलित वेबसाइट को लागी सबै सल्लाहहरु पाउनुहुनेछ।
तपाईं आज मेटा कुञ्जी शब्दहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
खोजी ईन्जिनको क्रलबोटहरू निरन्तर नयाँ वा अपडेट गरिएको सामग्री फेला पार्नको लागि कदमहरू छन्। यी रोबोटहरू सँधै एक पानामा रहदैनन्, त्यसैले यो यसको काम सकेसम्म सजिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। यो हुन्छ, उदाहरणका लागि, सहि भरिएको र सम्मिलित "रोबोट्स.टी.टी.टी." साथ साथै एक्सएमएल साइटम्यापको प्रयोगको साथ, जुन गुगल वेबमास्टर उपकरणहरूको माध्यमबाट आदर्श रूपमा प्रविष्ट गरिएको हो। थप रूपमा तपाईले पृष्ठहरू मात्र अनुक्रमणिका गर्नुपर्दछ जुन वास्तवमा श्रेणीकरण गर्नुपर्दछ।
समय अनुकूलन लोड हुँदै
व्यक्तिहरू आज समय सक्यो र द गो मा डाटा भोल्युम बचत गर्न चाहन्छ। यसैले गुगलले ती वेबसाईटहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ जुन स्लिम र छिटो लोड हुने अनलाइन उपस्थिति प्रस्ताव गर्दछ। एकातिर, यसको लागि माथि उल्लिखित कोड अप्टिमाइजेसन आवश्यक छ, अर्कोतर्फ, इम्बेडेड मिडिया जस्तै छविहरू फाइल आकारको मामलामा सकेसम्म सानो राख्नु पर्छ। नि: शुल्क गुगल उपकरणको साथ तपाईंको पृष्ठ स्पिड परीक्षण गर्नुहोस् "पेजस्पीड इनसाइट"।
निष्कर्ष B2B खोज ईन्जिन अनुकूलन: यी सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू हुन्
दिमागमा राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु जब यो एसईओको लागि आउँदछ: यदि तपाईंको वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरू सन्तुष्ट छन् भने गुगल पनि हो। किनकि विगतमा एसईओ पाठहरू कुञ्जी शब्दहरूले भरिएका थिए र ब्याकलिंक्स सबै सम्भावित स्रोतहरूबाट साइटमा शट गरिएको थियो, गुगल अब पूर्ण रूपमा भिन्न दिशामा जाँदैछ। खोजी ईन्जिनले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्छ। यसको मतलव SEO लाई तपाइँको वेबसाइटको प्रदर्शनको लागि र तपाइँको सामग्री राम्रो रँकिंग प्राप्त गर्नका लागि विज्ञद्वारा गरिनु पर्छ। तर त्यसका लागि तपाईले केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। किनभने संग Semalt AutoSEO प्याक, जुन वास्तविक "पूर्ण घर" हो, तपाईंको अनलाइन कम्पनीले प्राप्त गर्नेछ:
वेबसाइटको राम्रो दृश्यता
कुञ्जी शब्दहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्
वेब एनालिटिक्स रिपोर्टहरू।